Agaasimaha Ciyaaraha Barcelona Ee Robert Fernandez Iyo Masuuliyiin Kale Oo Germany Ku Laabtay Si Ay U Soo Dhamaystiraan Heshiiska Ousmane Dembele. – WWW.Gool24.net
Barcelona ayaa saacada soo socda dhamaystiri karta heshiiska sida wayn ay jamaahiirta kooxdeedu uga war sugayeen ee Ousmane Dembele waxaana dalka Germany dib ugu laabtay masuuliyiin kooxda Barcelona ka socota oo uu hogaaminayo agaasimaha ciyaaraha ee Robert Fernandez. Iyada oo Borussia Dortmund si cad saxaafada uga sheegtay in Dembele uu kooxdooda kabixi karo haddii ay Barcelona fuliso dalabkooda ayay masuulinta Camp Nou doonayaan in ay soo gabagabeeyaan heshiiska Ousmane Dembele uu Barcelona ugu soo biirayo.
Waxaa safarka Germany agaasimaha ciyaaraha Barcelona ee Robert Fernandez ku wehelinaya Urbano Ortega iyo Jaume Sola. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Barcelona ay hadda qarka u saaran tahay dhamaystirka heshiiska 20 sano jirkan ree France kaas oo la filayo in uu noqon doono saxiixii saddexaad ee ay Barcelona xagaagan samaynayso.
Jaume Sola ayaa bartiisa twitterka soo dhigay saddexdan nin oo qayb ka ah duulimaadka Air Berlin waxayna doonayaan in Borussia Dortmund ay markale wada xaajood kala soo yeeshaan heshiiska Ousmane Dembele balse kooxda ree Germany ayaa shuruud adag ku xidhay in Barcelona ay sarre u qaado dalabkeeda.
Waxaa jira farqi u dhexeeya kooxaha Borussia Dortmund iyo Barcelona ee qiimaynta Dembele iyada oo agaasimaha ciyaaraha kooxda Dortmund ee Michael Zoric uu si cad u sheegay: “Haddii ay la kulmaan dalabkayaga, Dembele waa la iibin doonaa, haddii kale wuu sii joogi doonaa”.
Barcelona ayaa oo maanka ku haysa in waqtigii uu xidhmi lahaa suuqa kala iibsigu uu soo dhaw yahay isla markaana ayna wali helin badalka Neymar Jr oo PSG ku biiray ayaa doonaysa in ay sarre u qaado dalabkii ay hore Dortmund ugu soo diiday iyada oo la filayo in saacado ay ka hadhsan yihiin waqtiga uu Ousmane Dembele noqon doono ciyaartoy Barcelona ah.
Ousmane Dembele ayaa haddaba go’doon kaga jira kooxdiisa Dortmund kadib markii uu diiday in uu tababarka ka soo xaadiro balse sidoo kale Dortmund ayaa ganaax gaadhka u galisay xidiga ree France taas oo keentay in xidhiidhkii u dhexeeyay maamulka Dortmund iyo Ousmane Dembele uu gabi ahaanba burburay taas oo cadaadis ku saaraysa in ay Barcelona wada xaajood la galaan.